ALook - Light-leak Lomo Analog filter များ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ALook - အလင်း-ယိုစိမ့် Lomo အင်နာလော့စိစစ်မှုများ
ALook - အလင်း-ယိုစိမ့် Lomo အင်နာလော့ APK ကိုစစ်ထုတ်ပေး
- 40 + ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်း filter များ
- 30 + အလင်း-ယိုစိမ့်ဆိုးကျိုးများ
- 20 + ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Scratch နှင့်ဖုန်
- 50 + Gradient အရောင် filter များ
- တစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါဆက်ကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု (chromatic ထစ်အငေါ့)
- ရွှဲဆန့်ကျင်ဘက်, အရောင်အသွေး, ထိတွေ့မှု, အရောင်အဝါနှင့်ပိုပြီးညှိ။
photography IN NEW အလေ့အထကိုလျှပ်တစ်ပြက်လက်ခံ
သငျသညျချို့ယွင်းအနုပညာအကြောင်းကိုကြားသိဖူးသလော တောင်မှနာမည်ကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမှပုံပျက်သက်ရောက်မှုသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုသေချာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏ပြခန်းတစ်ခုလတ်ဆတ်ထောင့် add ပါလိမ့်မယ်။ ထိပ်ဖျား: TV မှာဆက်ကြောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံတူနှင့်အတူအံ့ဖွယ်အလုပ်မလုပ်!
သင့်ကိုယ်ပိုင် photo editing STYLE ဖော်ဆောင်
သငျသညျကွဲပြား opacity ကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ filter များလျှောက်ထားခြင်း, မည်သည့်ပေါင်းစပ်နဲ့ volume ထဲမှာ effect နှင့် filter layer အားအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေါင်းစပ်သန်းပေါင်းများစွာကိုဆိုလိုသည်။ ကော်ပီကူးဖို့ခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်ကြောင်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ပုံသေနည်း Create!
သင့် Photo Sharing
အထင်ကြီးလိုလားသူ-Level ဓာတ်ပုံကိုတည်းဖြတ်ဖန်တီးယခုအခမဲ့ ALook ရယူပါ!
bug fixed ။
ALook - အလင်း-ယိုစိမ့် Lomo အင်နာလော့စိစစ်မှုများ
20.62 ကို MB
PoloImage - ...
Retro Filter - …
လေအေးအရည်အသွေး - အချိန်ပြည့် AQI